Khamiis, Janaayo 27, 2011 Khamiis, Juun 18, 2015 Douglas Karr
Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan bilowno dadaal cusub oo aan ku wehelineyno Joornaalka Teknolojiyada Suuqgeynta iyo Raadiyaha Teknolojiyada Suuq geynta… waxaan sidoo kale bilaabaynaa taxane Video Video Suuq geyn ah! Waxaa marti galiyay soona saaray 12 Xidig Media, taxanahan wuxuu kuusoo bandhigi doonaa hogaaminta shirkadaha tikniyoolajiyadda suuq geynta iyo dadka ka dambeeya wax soo saarka iyo adeegyada! Midka ugu horreeya ee taxanaheennu waa Aprimo, oo ah shirkad otomaatig ah oo suuq-geyn ku leh qalab casri ah oo casriyeysan oo loogu talagalay suuqgeeyayaasha. Halkan Indianapolis, waan helnay
Aprimo: Qalabka Xaddidan ee Suuqgeynta Isku-dhafan
Arbacada, Nofeembar 3, 2010 Jimce, Maarso 11, 2016 Douglas Karr
Sannadkan, waxaan aragnaa xoogaa horumar ah oo la yaab leh oo ku saabsan isdhaafsiga isticmaalaha ee suuqgeeyayaasha. Sannadkii hore waxaan la kulmay kooxda hoggaanka ee Aprimo ka dib markii aan la hadlay Haresh Gangwani, VP of Strategy Product. Shirkadda ayaa dhowaan wareejisay qalabka waxayna bilawday inay bixiso softiweer adeeg "Studio" ah. Sidoo kale waa la i baray oo waxaan la kulmay agaasimahooda guud Bill Godfrey waqti dheer. Waxay ahayd wada hadal cajiib ah oo ku saabsan Kacaankii Suuqgeynta… nasiib darose waxaan sameeyay a
Talaado, Nofeembar 6, 2007 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Waxaan leenahay macmiil haysta khaas ah oo kaliya wanaagsan ilaa Kirismaska ​​iyo dejinta maalmaha ilaa inta uu dhacayo ay ku jirto goob ku keydsan keydka macluumaadka Waxaan u baahday in aan qoro shaqo qarsoon (shaqo la qorsheeyay) taas oo cusbooneysiisa aagaga mid kasta oo ka mid ah maqaaxiyohooda habeen kasta. Marnaba kamaan qorin shaqooyinka cron ka hor - waxaan u mahadcelinayaa saaxiibkay, Tim, oo ku sugan Imavex oo igu hoggaamiyay jihada saxda ah.